बढ्यो आज मंगलबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ , कुन देशको कति ? – Life Nepali
बढ्यो आज मंगलबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ , कुन देशको कति ?
काठमाण्डौ। मंगलबार सबै विदेशी मुद्राको भाउ बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ८९ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ११३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ६० पैसा तोकिएको थियो ।
साउदी रियाल एकको खरिददर ३० रुपैयाँ २१ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ २९ पैसा रहेको थियो ।
कतारी रियाल १ को खरिददर ३१ रुपैयाँ १२ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ २८ पैसा तोकेको छ । हिजो खरिददर ३० रुपैयाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ४ पैसा रहेको थियो । यस्तै ओमानी रियाल १ को खरिददर २९५ रुपैयाँ ०५ पैसा रहेको छ । हिजो खरिदर २९६ रुपैयाँ ६१ पैसा रहेको थियो । आज यूएई दिर्हाम १ को खरिददर ३० रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर ३१ रुपैयाँ ०१ पैसा तोकेको छ । हिजो सोमबार खरिददर ३० रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर ३० रुपैयाँ ९३ पैसा थियो ।
मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर २७ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ५० पैसा रहेको छ । हिजो खरिददर २७ रुपैयाँ ३३ पैसा र बिक्रीदर २७ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको थियो । कोरियन वन १ सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६६ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ७१ पैसा तोकेको छ । हिजो सोमबार खरिददर ९ रुपैयाँ ६४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६९ पैसा थियो ।
कुवेती दिनार १ को खरिददर ३७३ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकेको छ । हिजो यसको खरिददर ३७२ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर ३७४ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको थियो । बहराइन दिनार १ को खरिददर ३०० रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर ३०२ रुपैयाँ ०६ पैसा तोकेको छ । हिजो यसको एकको खरिददर २९९ रुपैयाँ ७५ पैसा र बिक्रीदर ३०१ रुपैयाँ ३४ पैसा थियो । हेर्नुहोस् तल ‘तालिकामा विस्तृतमा बिबरण :
Previous सांसदलाई ६ करोड नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
Next ४% ब्याज दरमा महावीर पुनलाई ऋण दिने कोहि हुनुहुन्छ ??